DEG DEG: Mukhtaar Roobow oo isku dhiibay dowladda Soomaaliya, loona qaaday Xudur – Xeernews24
DEG DEG: Mukhtaar Roobow oo isku dhiibay dowladda Soomaaliya, loona qaaday Xudur
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur uu isku dhiibay maamulka Koofur galbeed iyo dowladda Feederaalka ah ee Soomaaliya, kaddib wada hadalo saacadihii la soo dhaafay ka socday deegaanka uu ku sugnaa ee Gobolka Bakool.
Afhayeenka Madaxtooyada Koonfur Galbeed Nuuradiin Yuusuf Abuukar ayaa u sheegay warbaahinta in Abuu Mansuur uu aqbalay inuu isku dhiibo dowladda, isla markaana loo qaaday degmada Xudur.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Abuu Mansuur keligiis oo aanay la socon ciidamadiisa isku dhiibay Maamulka Koonfur Galbeed, iyadoo lagu wado in degmada Xudur kula kulmo Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya iyo Mas’uuliyiin ka tirsan Koonfur Galbeed
Mas’uuliyiin ka tirsan Koonfur Galbeed ayaa shalay kula kulmay Sheekh Roobow agagaarka deegaanka Abal, waxaana wada hadaladaas laga gaadhay is faham sida ay sheegayaan warar aanu heleyno.
Maamulka Koonfur Galbeed ayaa saanad hub iyo ciidamo xoojin ah u dirtay Abuu Mansuur, si uu isaga difaaco weerarka Al-Shabaab uga imaanaya.
Wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegey in ay hada Rooboow iyo wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya ku kulansan yihiin magaalada Xudur ee gobolka Bakool.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/08/IMG_20170623_213413-280x175.jpg 175 280 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-08-13 10:09:432017-08-13 10:09:43DEG DEG: Mukhtaar Roobow oo isku dhiibay dowladda Soomaaliya, loona qaaday Xudur
Mohamed Farah oo Niyadjab kala baxay Garoomadda kadib Markii Sanka Laga Hor... DAAWO:MAXKAMADA SARE EE MAAMULKA SOMALILAND OO GO,AAN KA SOO SAARTAY MURANKII...